Rabshado ka dhacay Calais - BBC Somali
Rabshado ka dhacay Calais
Image caption Xeradaasi ayaa la doonayaa in la xiro oo dadka muhaajiriinta ah la geeyo goob kale.
Rabshado hor leh ayaa ka dhacay dekedda Calais ee dalka Faransiiska xilli kooxa burburinta u qaabilsan ay burburinayeen boqolaal guri oo cooshado ka sameysan oo ay halkaasi ka sameysteen muhaajiriin doonaya in ay Britain galaan.
Ciidamada booliska dalka Faransiiska ee ka hor tagga rabshadaha ayaa suntan dadka ka ilmeysiiso u adeegsaday si ay u kala eryaan dad dhagax tuurayay kooxahaasi burburinta ku guda jiray.
Xiisad ayaa ka aloosnayd bannaanka hore ee xeradaasi ay muhaajiriinta ku jiraan, iyadoo muhaajiriintu ay ku yaaceen dhanka dekedda.
Mas’uuliyiinta ayaa waxa ay sheegayaan in muhaajiriintu ay tahay in ay tagaan goob kale oo ka tirsan dalkaasi basle muhaajiriinta ayaa ka cabsi qaba in arrintaasi ay sababi karto in lagu khasbo in ay magan gelyo weydiistaan Faransiiska oo ay u suurtagali weydo in ay Britain galaan.
Dadka halkaasi ku sugan ayaa waxaa ku jira Soomaali doonaya in Britain ay iska dhiibaan oo ay magan gelyo weydiistaan.